Saraakiil ka tirsan booliska koonfur galbeed oo tababar loogu soo xiray Baydhabo – Radio Muqdisho
Saraakiil ka tirsan booliska koonfur galbeed oo tababar loogu soo xiray Baydhabo
Ku-simaha Taliyaha ciidanka Booliska Koonfur Galbeed ahna Taliyaha Booliiska Gobolka Baay Gaashaanle Dhexe Amiin Maxamed Daruur ayaa tababar ugu soo xiray Baydhabo ciidamo ka tirsan Booliiska Koonfur galbeed, si ay uga qeyb qaataan xoojinta Nabadgelyada guud ahaan Gobollada Baay iyo Bakool.
Tababarkan oo socday muddo lix cisho ah, isla markaana ciidanka la barayay hanaanka ay ula dhaqmi lahaayeen shacabka iyo dhowridda xaquuqda aadanaha ayaa waxaa ka qeyb galay saraakiil ka kala socotay Gobollada Baay iyo Bakool.
Qaar ka mid ah ciidanka ka faa’iideystay tababarka ayaa sheegay inay gaarsiin doonaan askarta kale ee aan nasiibka u yeelan, ayna ku dhaqmi doonaan casharada ay
Ku-simaha Taliyaha ciidanka Booliska Koonfur Galbeed ahna Taliyaha Booliiska Gobolka Baay Gaashaanle Dhexe Amiin Maxamed Daruur ayaa sheegay in saraakiishan ay ka kala yimaadeen gobollada Baay iyo Bakool, loona baahanyahay inay xoojiyaan la shaqeynta shacabka.
“Waxaa la idin tababaray sidii aad u bad baadin lahaydeen shacabka deegaanada Koonfur Galbeed, habdhaqanka qofka la soo xiro ee eedeysanaha ah iyo dhowridda xaquuqda aadanaha” ayuu yiri Gaashaanle Dhexe Amiin.
Wasiir ku-xigeenka Amniga Koonfur Galbeed Mudane Isaaq Baarow ayaa sheegay in booliska uu uga mahadcelinayo sugidda Amniga magaalada Baydhabo, isagoo kula dar daarmay inay si hufan u gutaan waajibaadka loo igmaday.
“Waxaan idinka rajeyneynaa in wixii aad halkan ku barateen aad ku dabaqdaan howsha la idin xilsaaray, waxaana codsaneynaa in la joogteeyo tababarada nuucaani oo kale ah, macalimiintana waxaan uga mahadcelinayaa tababarka ay siiyeen saraakiisha” ayuu yiri Wasiir ku-xigeenka Amniga Koonfur Galbeed.
Somalia Government is Drafting a National Action Plan to Assist People with Disabilities and Survivors of Explosive Hazards